Fanamainana volo sy kettle AOLGA ao amin'ny The Appartement of Singapore
Vaovao tsara! Ny mpanamory volo vaovao sy ny vilaninay dia ao amin'ny efitrano iray akaikin'ny CBD any Singapore. Vokatra mahafinaritra, tiavo izy ireo! Jereo aloha ireo sary. (AOLGA Hair Dryer RM-DF15 ao amin'ny fitafiana) (AOLGA Electric Kettle LL-8865 ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny) (sary an-dakozia misy kettle vaovao Aolga) & nbs ...
Ahoana ny fomba fanaovana kafe amin'ny fampiasana vovo-kafe ao amin'ny milina kafe AOLGA AC-514K anao
1. sokafy ny tahony - esory ny sobika fanaovana labiera ho an'ny kapsily Dolce-Gusto. fampisehoana mahazatra io. 2. Kitiho ny vovo-kafe ...
Ahoana ny fampiasana milina kafe AOLGA Capsule AC-514K
Ny kafe vaovao sy mafana dia manaitra ny ati-dohanao ary manome fiatoana haingana ao anatin'ny andro iray be atao. Na izany aza, raha te hankafy ny kafe ianao, ny dingana voalohany dia ny mianatra ny fampiasana araka ny tokony ho izy ny AOLGA Capsule Coffee Machine AC-514K 1 Sokafy ny tahony - Tsoahy ny harona fanaovana labiera ho an'ny kapsily Nespresso, izay ...
Aolga Steam Iron amin'ny famokarana
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-05-14
Ny vy vaovao natombokay amin'ny famokarana dia miasa ny mpiasa eto amin'ny tsipika famokarana hamokarana ny setroka ary afaka mahita ny sarin'ny famokarana ianao. (ny tehinay dia manangona vy volomparasy) Ity vanim-potoana ity dia sahirana be amin'ity famokarana vy ity izahay satria afaka andro vitsivitsy ny daty mamy. Thoug ...
Mahomby ny asa
Androany, tiako haseho anao ny manodidina anao mba hampahafantatra anao bebe kokoa momba anay. Miaraka amin'ireo birao ao HK, Shenzhen ary Shanghai, ny AOLGA dia manana ny ozininay sy ny trano fanatobiana entana any amin'ny faritanin'i Guangdong. Ny voalohany tianay hizara dia ny tsipika famokarana fanamainana volo. Amin'ity sary etsy ambony ity dia ahitanao ny volo telo lehibe ...